Gabar CIyaalka Xaafadda Ah oo Raadineysa in ay qabato xilka Gudoomiye Degmo oo Gobolka benadir ah#sawir+magac | Xaqiiqonews
Gabar CIyaalka Xaafadda Ah oo Raadineysa in ay qabato xilka Gudoomiye Degmo oo Gobolka benadir ah#sawir+magac
Waxaa baryahan danbo aad u soo badanaayey dad aan siyaasadda waxba ka aqoon ee u rucleeynaya i Xilal ka qabtaan maamulada gobolada dalka iyo kan caasimadda.
horay soomaaliya waxa ay ka daashay in xilalka la iskaga dhiibo odayaal aan aqoon u laheen siyaasadda waxaana ragga la xasuusta ee ugu danbeeyey ka mid ah gudoomiyihii hore ee degmada yaqshid Muxdin Cabdi juris oo inta uusan xilkaas qabanin ahaa waardiyaha Isbitaal keesaneey iyo gudoomiyaha hadda xilka sida ku meel gaarka ah u haaya ee gobolka Hiiraan Cali jeyte oo ahaa Waardiyahii hore ee iskoolka mujamac dhibi al tacliimi ee baladweyne.
Warar hoose oo ay heshay shabakadda baahisa wararka qarsoon ee xaqiiqonews ayaa tilmaamaya in gabar da, yar oo aan aqoon badan u laheyn siyaasadda ay ka mid tahay dadka u xusul duuban in xilka ka qabtaan gobolka benaadir.
gabar magaceeda lagu sheegay Zeynab Xaabzey ayaa dooneysa in noqoto gudoomiye degmo gaar ahaan gobolka benadir.
Zeynab ayaa u gudbisay gudoomiyaha Gobolka benadir Thabit Warqad codsi ah oo ku aadan qaabka ay u daneeyneyso xilkan.
warar hoose oo ay heleyso xaqiiqonews ayaa sheegaya in Zeynaba ay taageero ka heysato NGO-yo u dooda waxa loogu yeeray Awoodsiinta Dumarka wax ayna hay,adahaasi hadda ka bilaabeen baraha bulshada olale lagu taageeraayo zeynab